चैत्र १३ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा “दलितलाई प्लास्टिकको गिलासमा चिया” भन्ने शिर्षकमा खबर छापिएको छ । — JagaranMedia.Com
आफ्नै विवाह रोक्दै बालिका
दलितलाई तिमी !
जातीय विभेद गर्दै कुटपिट गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ
चैत्र १३ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा “दलितलाई प्लास्टिकको गिलासमा चिया” भन्ने शिर्षकमा खबर छापिएको छ ।
जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७४/९/१७ गते
लक्ष्मी डोमका लागि प्लास्टिकको गिलासमा चिया हाल्दै चियापसले । तस्बिर : अली असगर देवान
अली असगर देवान
वीरगन्ज : पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका-७ निवासी ५० बर्से निरक्षर लक्ष्मी डोम सधैं बिहानै चिया पिउन गाउँको चिया पसल पुग्छन् । पसलमा चाँडै पुगे पनि अरूले सिसाको गिलासमा चिया खाइसकेपछि मात्र उनले बेग्लै राखिएको प्लास्टिकको गिलासमा चिया खान पाउँछन् ।
पसलको एउटा कुनामा बेग्लै झोलामा राखिने प्लास्टिकको त्यो गिलास उनी र उनका समुदायका अरूलाई चिया दिन राखिएको हो । त्यही चिया पसलमा महम्मद फकरोदिन देवानलाई भने सिसाको गिलासमा चिया दिइन्छ तर ३÷४ पटक माझेर । लक्ष्मीलाई चिया दिने प्लास्टिकको गिलास भने सफा गरिँदैन ।
त्यति मात्र होइन, लक्ष्मीले अदबपूर्वक चिया माग्नुपर्छ, नत्र चिया खान नपाइने मात्र होइन अनेकौं वचनका बाण सहनुपर्छ । अरूले चिया माग्दा भोजपुरीमा ‘चाय द’ (चिया दिनुस्) भने पुग्छ तर उनले ‘जी मालिक चाय’ (हजुर मालिक चिया) भनेर माग्नुपर्छ । उनले चुल्होभन्दा ५ मिटर पर भुइँमा बसेर चिया पिउनुपर्छ तर उनीसँगै चिया पिउन त्यहाँ पुगेका देवानसहित अरूले भने टेबलवरिपरि बसेर मजाले चियाको चुस्की लिन पाउँछन् ।
चियाको पैसा तिर्दै सबै जना आ-आफ्नो बाटो लाग्छन् । अरूजस्तै लक्ष्मी पनि चियाको पैसा तिर्छन् र उनले तिरेको पैसा पनि सबैले तिरेको पैसा राख्ने बाकसमा (पेटी) मै राखिन्छ । पैसामा कुनै भेदभाव छैन ।
पैसा एउटै बाकसमा राख्न हुने, पैसामा कुनै छोइछिटो नहुने तर पानी छोइने देखेर उनका मनमा अनेकौं प्रश्न उब्जन्छन् ।
चिया पिउँदा पसलेले गर्ने व्यवहारबाट आफू हेपिएको अनुभूति हुने उनी बताउँछन् । ‘म पनि अरूजस्तै मान्छे हूँ तर मसँग किन यस्तो व्यवहार ? ’ उनी भन्छन्, ‘के डोम समुदायमा जन्मिनु पाप हो ? कि डोम समुदायको रगत रातो छैन ? धारामा पानी भर्न पाइँदैन, पसलमा सबैसँग खान र बस्न मिल्दैन, आखिर किन ? ’
उनी सामाजिक कार्यमा समेत यस्तै विभेद हुने दुखेसो पोख्छन् । ‘गाउँघरमा हुने भोज भतेरमा सबैले खाइसकेपछि मात्र खान दिइन्छ नत्र बासी खानेकुरा भोलिपल्ट दिन्छन्’, उनले भने, ‘तर त्यही बिहेमा डोमले नै बनाएका डाला (बिहेमा चाहिने सामग्री) भने चल्छन्, छोइँदैनन् ।’ हिन्दू परम्पराअनुसार बिहेमा डाला नभई बिहे नै हुँदैन ।
लक्ष्मी सुरुमा गाउँभन्दा परको (शौच जाने ठाउँ) ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएका थिए । उनी बसेकाले त्यो जग्गाको भाउ बढेन भनेर केही मान्छेले उनको उठीबास गरे । अहिले जेनतेन उनी गाउँभन्दा बाहिर आफ्नै नाममा करिब ५ धुर घडेरी किनेर घर बनाएर बसेका छन् तर यो घर पनि सबैले खुला शौच गर्ने ठाउँमै छ । उनका छोरा, बुहारी, नाति, नातिना गरी परिवार संख्या १२ जनाभन्दा धेरै छ ।
दलितमाथि जातीय भेदभाव नभई विपन्न आर्थिक अवस्थाका कारण वर्गीय भेदभाव हुने गरेको ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष प्रभु पटेलको बुझाइ छ । ‘अरूसँग पैसा मागेर आफ्नो जोहो टार्ने भएकाले अरूले हेप्छन्’, उनले भने । उनका अनुसार दलित सम्पन्न भए वा आर्थिक अवस्था सुधार भए यस्ता सबै भेदभाव स्वतः अन्त्य हुनेछ । सम्पन्नले मात्र सम्मान पाउने अवस्थाले गर्दा पनि समस्या जटिल भएको उनी बताउँछन् ।
अर्थ राजनीतिका कारण जातीय भेदभावको जरो समाजमा बलियो हुँदै गएको छ । दलितको तारे होटलमा नजाने र नखाने कोही हुँदैन तर ग्रामीण भूभागमा पुस्तौंदेखिको छुवाछुतले समाजको मानसिकता आधुनिक बन्न सकेको छैन । राजनीतिक शक्तिमा र सत्तामा रहेका तथा आर्थिक अवस्था राम्रा भएका दलितले अपमानित हुनु पर्दैन । लक्ष्मी आफ्नाले समेत छोइछिटो गर्दा मन अमिलिने बताउँछन् ।
माओवादी नेता रामअ श्रे राम पर्सा जिल्लाका पूर्वसांसद पनि हुन् । उनलाई सबैले नमस्कार गर्छन् । उनीमाथि कसैले विभेद गर्ने आँट नगरेको देख्दा लक्ष्मीलाई गरिब हुनु नै अभिशाप रहेछ भन्ने लागेको छ । प्रभुहजरा सत्ताधारी दल एमाले पर्साका अध्यक्ष हुन् । दलित भनेर हेपिएका समुदायका सदस्यले राजनीतिक नेतृत्व दिए पनि समाजमा अझै छुवाछुतजस्तो सामाजिक अपराध कायमै रहेको लक्ष्मी बताउँछन् ।
छुवाछुत, भेदभाव तथा पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि मधेसमा एक दशक आन्दोलन भएको दलितका युवा नेता धीरज पासवान सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आन्दोलन त भयो । सरकारमा पनि मधेसकेन्द्रित दल गयो तर दलितको मुद्दा ज्यूँकात्यूँ छन् ।’ दलितको नाममा राजनीति गरेर सरकारमा गएका मधेसी दलले पनि दलितका कुनै पनि मुद्दाको वकालत नगरेको आरोप उनी लगाउँछन् ।
पर्सा जिल्लाको कुल ६ लाख ११ हजार जनसंख्यामध्ये दलित समुदायको ७६ हजार २ सय ६१ छ अर्थात् कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ ।
साभार \_अन्नपूर्ण पोष्ट
मोती दमिनीको बातै -कविता
जातिय तुच्छ गालिको कमेन्टले मर्न मन लाग्यो, अब न्याय माग्छु : शंकर बि.सी
बिसे नगर्चीको बयान- मालिक ! म बौलाएँ।
जबरजस्ति गाँसिएको एकताको माला (कविता)
शरीरको रौँ भइदिए खौरेर जलाएर खरानी पार्थें मेरो जात (कविता)
‘गृहमन्त्री पाए ३ महिनामै आधा अपराध घटाउँछुु’
दलितसंगको विवाहले साहित्यकार नै सामाजिक बहिष्साकारमा
धनकुटा — ‘दलित’ सँग विवाह गरेको भन्दै आफ्नै बाबुको मृत्यु हुँदा साहित्यकार तथा कलाकार मुकुन्द सुवेदी ‘प्रयास’ सामाजिक बहिष्कारमा परेका...
पानी छोएको निहुँमा हँसिया प्रहार, मिल्‍न दबाब दिँदै नेता
दैलेख : जिल्लाको नारायण नगरपालिका १० भवानीमा एक दलित महिला पानी छोएको निहुँमा कुटिएको घटना चार महिनापछि मात्र बाहिर आएको...
साउन २०, २०७६
लोकसेवा विज्ञापन विरुद्ध सांसदको सर्मथन जुटाउँदै जातीय संस्था
काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा निकालेको विज्ञापनमार्फत सरकारले परिवर्तनमाथि प्रहार गरेको जातीय संघसंस्थाले निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।...
कुवेतमा निधन भएकी अप्सरा कामीको शव चन्दा उठाएरै पठाईयो
कुवेत | कुवेतमा आगलागीमा परि ज्यान गुमाएकी अप्सरा कामीको शव चन्दा उठाएर स्वदेश पठाइएको छ । कुवेत स्थित नेपाली राजदुताबासले मृतक...
पानी छोएको निहुँमा महिला कुटिएको घटनाप्रति मानव अधिकार अयोगको ध्यानार्कषण
दलित महिलाले पानी छोएको निहुँमा हँसिया प्रहार भएको घटनाप्रति मानव अधिकार आयोगको ध्यानार्कषण भएको छ । आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा...
दलितलाई न्याय पाउन मुस्किल
दैलेख : भगवतीमाई गाउँपालिका रुमका नेप्टे कामीको मृत्यु भयो। स्थानीय दलितहरुले उनको शव जलाउन घाटतर्फ लैजादै थिए। त्यही क्रममा मलामीहरु कथित...
दलित समुदायको पुर्खौली पेशा सङ्कटमा
रामेछाप – रामेछापका कुलबहादुर विश्वकर्माले आरनको काम गर्न छाडेको दुई वर्ष भयो । ६५ वर्षीय कुलबहादुरले आरनको काम गर्न छाडेसँगै...